शैन्डेलियर र छत बत्तीको फाइदा र हानि
घरको सजावटको प्रक्रियामा, प्रकाशको छनौट एकदम महत्त्वपूर्ण लिंक हो। आजको सजावट बजारमा, मुख्यधाराको प्रकाशलाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ: झूमर र छत बत्तीहरू। यी दुई प्रकारको प्रकाशका आफ्नै विशेषताहरू छन्, जसले धेरै मानिसहरूलाई ई ...
एउटा झूमर कसरी छनौट गर्ने
शैन्डिलियर्स सामान्यतया बैठक कोठा, भोजन कक्ष वा घरमा शयनकक्षमा प्रयोग गरिन्छ। झूमर अत्यधिक सजावटी हुन्, तर त्यहाँ झूला के प्रकार छन्? एउटा झूमर कसरी छनौट गर्ने? झूमर कसरी स्थापना गर्ने? अर्को, मलाई यसको बारेमा थाहा दिनुहोस्। 01 झूमरका प्रकारहरू समुद्री समुद्री भरिएका झूमर फाउन्डेलहरू ...
मानव भावनाहरु मा बिभिन्न रंग तापमान को प्रभाव
भिन्नता रंग तापमान फरक वातावरण सिर्जना गर्दछ। उदाहरणका लागि, न्यानो र colors्गिले न्यानो, रोमान्टिक र आरामदायक वातावरण सिर्जना गर्न सक्दछ, जबकि चिसो रंगले चित्र चिसो र उजाड देखाउँदछ। बिभिन्न रंग तापमान तल देखाइन्छ ： हामी सामान्यतया रंगलाई विभाजित गर्दछौं ...
२ मिटर ओछ्यानको टाउकोमा भित्ता बत्तीको आकार कति हो?
१. पलंग भित्ता बत्ती तलबाट १. from देखि १.8 मिटर टाढा हुनुपर्छ। यदि भित्ता-प्रकारको बेडसाइड भित्ता बत्ती बाहिर आयो भने, पर्खाल र बेडसाइड भित्ता बत्तीको बिचको दूरी १० सेमीदेखि cm० सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। यदि ओछ्यानको उचाइ cm 45 सेमी छ भने अधिक गद्दाको सामान्य उचाइ पुनः गर्न सक्दछ।
कसरी एउटा करिडोरको साथ घर सजावट गर्ने ठाउँ खाली छ, बत्तीहरू चयन गरिएको छैन, पाँच प्रकारका मिलान तातो र उज्यालो छन्।
यदि करिडोरमा पर्याप्त प्रकाश छैन भने, ठाउँ धेरै मधुरो देखिनेछ। यदि चीजहरू यस्तै प्रकारले चल्दछ भने, यसले मानिसहरूलाई उदासिनता र भयको भावना दिन्छ। त्यसोभए कसरी एउटा करिडोरको साथ घर सजाउने? अस्पष्ट रूपमा कोरिएको कोरिडोरको सामना गर्दै, स्पा बनाउनको लागि पाँच प्रकारको प्रकाश फिक्स्चरको सिफारिश गरिन्छ ...
पाँच बस्ने कोठाको झूमरको सूची, जुन तपाईंलाई तपाईंको घरको लागि उत्तम हो जस्तो लाग्छ
बैठक कोठा एक परिवार लेआउट को एक धेरै महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यो पारिवारिक मनोरञ्जन र मनोरन्जनको लागि मात्र ठाउँ हो, र यो पाहुनाहरूको मनोरञ्जनको लागि मुख्य ठाउँ पनि हो। एक राम्रो सजावट पाहुनाहरु मा एक धेरै राम्रो छाप छोड्न सक्छ, र मान्छे को प्रशंसा गर्न को लागी, तपाईं यो छ भने ...
के यो भुइँको बत्ती किन्न आवश्यक छ? तपाईं अझै यो प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ
धेरै साथीहरूले टिभीबाट फ्लोर बत्तीहरूबारे जान्न सक्छन् जुन which० र 70० को दशकमा धनी परिवारहरूमा प्राय: देखिन्थ्यो। यद्यपि, आधुनिक फ्लोर बत्तीहरू सामान्यतया कोष्ठक, बत्तीहरू र प्रकाश स्रोतहरू मिलेर बनेको हुन्छ, एक ठाउँ ओगट्छ र पुरानो हुन्छ, त्यसैले धेरै मानिसहरूले यसलाई छनौट गर्दैनन्। यदि तपाईं यो लेख पढ्नुहुन्छ, ...
त्यहाँ झूमर र कुनै झूमर बीच भिन्नता छ, परिवर्तन वास्तवमा ठूलो छ!
समय अगाडि बढ्दैछ, र बत्तीहरू र लालटेनहरू पनि फरक रूपमा देखा पर्दै छन्। यद्यपि झ्यान्डर एक क्लासिक शैली हो, अधिक र अधिक डिजाइन प्रेरणाको साथ, कुनै मुख्य बत्तीको डिजाईन सजावटको मूलधार बन्न गएको छ! आज, हामी झूमर र कुनै सी बीचको भिन्नता बारे कुरा गरौं ...
कुन तल्ला बत्ती छनौट गर्न थाहा छैन? यो जस्तै छनौट गर्न सक्नुहुन्छ
सरल घरका सामानहरूको विकासको साथ, भुइँ बत्तीहरूका प्रकार र आकारहरू अधिक विविधिक भएका छन्, र तिनीहरूको कार्यहरूले पनि धेरै नवीनताहरू पार गर्यो। डिजाइनको सर्तमा, फ्लोर बत्ती नोर्डिक शैलीसँग सम्बन्धित छ, न्यूनतम पट्टी डिजाइन र एक घुमावदार डिजाइनको साथ ...
ठूलो झूमर पुरानो हो, र मुख्य बत्तीको डिजाईन अब लोकप्रिय छ, जुन उन्नत छ!
मलाई अझै पनि सजावट याद छ केही वर्ष अघि, बैठक कोठामा बत्तीहरू सबै ठूला-भोल्युम झूमर वा छत बत्तीहरू थिए, तर अब तपाईं तिनीहरूलाई सजावटमा पाउनुहुनेछ। धेरै मानिसहरूले मुख्य प्रकाश छोडिदिए, र कुनै मुख्य प्रकाश एक प्रवृत्ति नै भइसकेको छैन। १. मुख्य लीगको विशेषताहरू के हुन् ...
ठूला झूमर स्थापना नगर्नुहोस्, यी बत्तीहरू यस वर्ष लोकप्रिय छन्! आउनुहोस् र हेर्नुहोस्
१. छतको बत्ती छतको बत्ती शैन्डेलियर जस्तै केहि मिल्दोजुल्दो छ, तर त्यहाँ कुनै झुण्डिने प्रक्रिया छैन, त्यसैले यो अधिक सरल र ठाडो देखिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा यो, यो जापानी, नॉर्डिक र साधारण सजावट शैलीहरूको लागि धेरै उपयुक्त छ। २. डाउनलाइट डाउनलाइटहरू सामान्यतया विभिन्न फुर्सत बामा प्रयोग गरिन्छ ...
डिजाईन परिवर्तन जीवन अधिक सरल र तपाईलाई चाहिने चीज ल्याउनुहोस्
मानव केन्द्रित प्रकाशको बारेमा तपाईलाई के जान्नु आवश्यक छ, श्री एन्ड्रियास शुल्जले हामीलाई धेरै वास्तुकला प्रकाश परियोजनाहरू साझा गर्नुभयो र प्रमाणित गरे कि मानवीय रोशनी जताततै छ, र ज्योतिको माध्यमबाट मानव भावनाहरूमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ। एक धनी अनुभव प्रकाश निर्माता र निर्यातक को रूपमा, हामी ...
सजावटी बत्तीहरूको डिजाइनमा स्वतन्त्रताको ठूलो डिग्री हुन्छ। व्यावसायिक प्रकाशको विपरीत, जसले अप्टिकल गुणस्तरको अन्तिम प्राविधिक खोजी गर्दछ, सजावटी बत्तीहरूको डिजाईनले बत्तीको आकारको सुन्दरतालाई मात्र होइन, प्रकाश प्रभावको वातावरणमा पनि जोड दिन्छ। बिभिन्न अनुप्रयोगमा ...
एउटा झूमर कसरी छनौट गर्ने? डिजाइनरहरूले मालिकलाई कसरी सिफारिस गर्नुपर्छ?
चांडेलियर्स लोकप्रिय सजावट प्रकाशको रूपमा जो इनडोर रिक्त स्थानमा छतमा स्थापित हुन्छन्, उनीहरूको नरम प्रकाश र कडा सजावटको कारण ठूला र उच्च-अन्तर्गत इनडोर स्पेस (होटेलहरू, ठूला भोज भवनहरू, आदि) र घर ठाउँहरूमा लोकप्रिय छन्। धेरै वर्षसम्म मुख्य बत्तीको वकालतले एन गर्दैन ...
अप्रिल - २२-२०१२